Amandla eSMT-Shenzhen PhiliFast Electron Limited
I-odolo yangaphakathi. Zombini prototyping kunye nemveliso emininzi
Iifayile ziyafuneka IBhili yezixhobo (i-BOM), i-PCB (iiFayile zeGerber), iPick- N- Indawo yeFayile (XYRS)
Uhlobo lweNdibano yePCB I-SMT (i-tech mount tech), i-THT (nge-hole tech), okanye i-Mixed.
Uhlobo lwePCB Iibhodi eziqinileyo, iibhodi zeFlex kunye neebhodi eziqinileyo
Ezinye iiNdibano ukutyabeka okuhambelanayo, inaliti yeplastiki, ukwakha ukungunda, ukubopha iintambo, ukuhlanganisa intambo, indibano yebhokisi yokwakha, njl.
Izixhobo Izinto ezenziweyo ukusuka ku-01005, 0201, 0402 ukuya ngaphezulu
Izinto ezisebenzayo ezivela kwi-pitch ye-0.2mm
I-BGA (Ibhola yeGridi yeArray) ngaphezulu kwe-0.2mm
akukho mida yezinye izinto.
Icandelo Ukufezekisa I-Turnkey (i-STHL ibonelela ngawo onke amacandelo), i-turnkey yesiqingatha okanye iinxalenye ezibonelelwe ngumthengi.
Iipensile Laser usike stainless stencil, kunye okanye ngaphandle isakhelo. Isimahla kwii-odolo ezininzi ze-PCBA. (Nxibelelana neenkcukacha)
Uvavanyo Itsheki ebonakalayo ye-QC, ukuhlolwa kwe-AOI, uvavanyo lwe-X-ray kwi-BGA, ukutsha kweSoftware / inkqubo ye-IC, i-ICT, uvavanyo lweJig, uvavanyo olusebenzayo, uvavanyo lokuguga, i-EMI / iROHS / FIKELELA kuvavanyo ngokwesicelo.
Iipakethe Iingxowa ze-Antistatic, igwebu elingqingqwa nelithambileyo, ukukhuselwa kwebhegi yebhola, "#" amakhadibhodi okushiya izithuba, ukukhuselwa kwekhadibhodi enzima kunye nepakethe yobunzima obuphantsi.
Ezinye iiNkonzo Sikwabonelela ngentlanganiso yekhebula, ukubopha iintambo zentsimbi, ukwakha isinyithi sokubumba ngenaliti yeplastiki kunye nemveliso, iinkonzo zokwakha ibhokisi.
Iindidi zeSolder zombini zikhokelwe kwaye azikhokelekanga (RoHS ehambelana)
Iphakheji yecandelo Samkela iinxalenye kwiiRels, Sika iTape, iTyhubhu kunye neTreyi, iiLungu eziThintelweyo kunye noBunzima.
Ubungakanani beBhodi ye-SMT Ubungakanani beBhodi encinci: 45mm x 45mm (Iibhodi ezincinci kunesi sayizi kufuneka zenziwe iphaneli, kwaye sicebisa ngaphezu kwe-100mm * 100mm ukuphucula ukusebenza kakuhle)
Ubungakanani beBhodi enkulu: 400mm x 1200mm